I-Villa Serena, ifanele ukuphumla engqongwe yindalo
Ibekwe kwiinduli ezithambileyo zeMacerata, iVilla Serena yindlu entle yasefama enendawo yokubhukuda yabucala enombono ojikelezileyo welizwe elinomtsalane laseMarche.
Ithengwe ngo-1999 ngabanini bangoku, sonke eso sakhiwo sasiphantsi komsebenzi omde nonzima wokubuyisela owawulawulwa nguMnu.
Ithengwe ngo-1999 ngabanini bangoku, sonke isakhiwo sasiphantsi komsebenzi omude kunye nonzima wokubuyisela owawulawulwa nguMnu Giuliano, owanikezela lonke ulwazi lwakhe kunye nobuchule kumsebenzi owenziweyo, kunye nenenekazi uGina, owathi ngomdla. kunye nomsebenzi wobugcisa awulandeli kuphela ukhathalelo lwangaphakathi kodwa naleyo yegadi enkulu yangaphandle. Ukusukela ngo-2010 uVilla Serena wamkela abakhenkethi kunye neendwendwe, ngakumbi abantu basemzini abeza apha bevela kwihlabathi liphela ukuza kufuna uxolo noxolo.
Amagumbi amathandathu eVilla, anokuhlala ngokukhululekileyo ukuya kuthi ga kwi-18 abantu, abanzi kwaye aqhakazile kwaye axhotyiswe ngamagumbi okuhlambela abucala kunye nazo zonke ezinye izinto ezithuthuzelayo. Isakhiwo sonke senziwe ngezitena eziveziweyo kunye nelitye, iinkcukacha kunye nokugqiba ngokhuni kunye nentsimbi ekhandiweyo. Kwiindawo ezingaphandle kukho iindawo ezininzi zokuphumla, indawo ye-barbecue ene-oven edibeneyo yokutshisa iinkuni kunye nendawo yokudlala yabantwana. Kwakhona ngaphandle, kufikeleleka ngezinyuko eziphuculweyo, kukho indawo yokuqubha entle ejikelezwe yipatio yokugcakamela ilanga. macala onke yimithi yomnquma yamandulo kunye neminye imithi yokuhombisa.
Okungenayo kulawulwa buqu ngabanini abanikezela ngokufumaneka kwabo ukwenza inkonzo yokuthenga ekhaya kodwa kunye nokulungiselela uhambo olufutshane kunye nohambo.
Kulo mmandla kukho iindawo zokutyela ezigqwesileyo, ezinomgangatho ophezulu wokutya kwalapha ekhaya, kwaye kuyenzeka ukuba ungcamle iwayini okanye ukhenkethe ukhenketho kwindawo yokuthengisa iwayini edumileyo kule ndawo.
Enkosi kwi-oveni yangaphandle yokubasa ngamaplanga, izifundo zokwenza ipizza kunye nesidlo sangokuhlwa kubandakanya ipizza ephekwe kwi-oveni ebaswa ngamaplanga nazo zibanjwa ngokwesicelo seendwendwe.
Imizuzu nje eli-10 ngemoto ungafikelela kwindawo emangalisayo ye-Abbadia di Fiastra Nature Reserve, ivule unyaka wonke kunye nendawo efanelekileyo yohambo, ukukhwela ihashe, ukubukela iintaka.
Idolophu yaseMacerata ikwimizuzu engama-20 ngemoto. Abanini beVilla Serena bakwabonelela ngokuthenga amatikiti kwangaphambi kwexesha leSferisterio Opera Season.
Ngenyanga ka-Agasti, kwidolophu ekufutshane yaseSan Ginesio, unokufumana amava okwenziwa ngokutsha kwembali yePalio kunye neveki yeMedievalia.
Ukusuka apha kulula ukufikelela e-Ascoli Piceno, eLoreto, eRecanati kunye nezinye iidolophu ezinomtsalane zamaxesha aphakathi eMarche.
NGOXA OKUBUKA UBHEKISELELE WAMKELELA NGOKU KULANDELAYO:
Idiphozithi: 300 €
Iindleko zamandla: zibandakanyiwe
Ukucocwa kokugqibela: €80
Ukucoca okongeziweyo: € 20,00 ngeyure
Utshintsho lwelinen olongezelelweyo: € 25 igumbi ngalinye